Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း)
Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အသားပုပ်ခြင်းမှာ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ တစ်ရှူးများသေသွားသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ တစ်ရှူးများဆီသို့ သွေးမရောက်သောကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အသားပုပ်ခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်၏အစွန်အဖျားအင်္ဂါများ၊ နှလုံးနှင့်အဝေဆုံးအင်္ဂါများ ဥပမာ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းတို့တွင် အဖြစ်များ၏။ သို့သော် တခြားခန္ဓါကိုယ်အပိုင်းများတွင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အသားပုပ်ခြင်းမှာ အတွင်းအင်္ဂါများကိုပါ ထိခိုက်တတ်သည်။
ထိုအခြေအနေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ခြေ၊ လက်၊ အတွင်းအင်္ဂါ တစ်ခုခုတွင် စတင်လေ့ရှိသည်။ အသားပုပ်ခြင်းမှာ ပျံ့နှံ့တတ်ပြီး မကုသပါက သွေးလန့်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သွေးလန့်ခြင်းမှာ သွေးပေါင်ထိုးကျခြင်းအပါအဝင် တခြားလက္ခဏာအမျိုးမျိုးပါဝင်သော အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်၏။ သွေးလန့်ခြင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အရေးပေါ်ကုသရန်လိုအပ်ပါသည်။
အသားပုပ်ခြင်းမှာလည်း အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပြီး ခြေလက်ဖြတ်ထုတ်ပစ်ရခြင်း သေခြင်းအထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တတ်နိုင်သလောက် စောလျင်စွာကုသခြင်းက နောက်ဆုံးရလဒ်ကို ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါသည်။
Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသားပုပ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားအမျိုးသမီးဖြစ်နှုန်းနှင့် အတူတူပင်။ ဆီးချိုနှင့်သွေးကြောရောဂါများရှိသူများ၌ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ခြောက်သွေ့စွာ အသားပုပ်ခြင်း၏ ပထမဆုံးလက္ခဏာမှာ ဖြစ်နေသောတစ်ရှူးပတ်ပတ်လည်၌ အနီရောင်လိုင်း ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုလိုင်းတစ်လျှောက် အမည်းရောင် ပြောင်သွားပါလိမ့်မည်။
သင့်၌ အသားပုပ်ခြင်းဖြစ်နေကြောင်း သိရှိနိုင်မည့် လက္ခဏာများမှာ
နီမြန်း၊ နာကျင်၊ ဖူးယောင်နေသော အနာ
ပြည် သို့မဟုတ် အနံ့ဆိုးထွက်နေသော အနာ
ခန္ဓါကိုယ်၏တစ်နေရာတွင်ကွက်ပြီး ထိတွေ့မှုကို မသိနိုင်တော့ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တစ်နေရာတည်းတွင် ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖြစ်သော အနာများ
အရေပြားတစ်နေရာတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်ပြောင်းသွားခြင်း (စိမ်းနက်နက်ရောင်၊ အနီ၊ အပြာ သို့မဟုတ် ကြေးဝါရောင်)
စောလျင်စွာ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့မှာ ရောဂါအခြေအနေ ပိုဆိုးမလာအောင်နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သည့်အခြေအနေကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန်ပြသဆွေးနွေးပါ။
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမည်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပင်။
Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသားပုပ်ခြင်းရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
သွေးသည်အောက်စီဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေး၏။ ဆဲလ်များအတွက် လိုအပ်သည့်အာဟာရများ၊ ကူးစက်ပိုးများအား တိုက်ထုတ်ပေးမည့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ပစ္စည်းများ ဥပမာ ပဋိပစ္စည်းများကိုလည်း သယ်ဆောင်၏။ သွေးကောင်းကောင်းမရပါက ဆဲလ်များလည်း မရှင်နိုင်တော့ပဲ တစ်ရှူးများ ပုပ်ဆွေးလာမည်ဖြစ်သည်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခံရမှုကြာရှည်လာလျှင် ပိုးများမှာ အနိုင်ဖက်ကဖြစ်သွားပြီး တစ်ရှူးများကို သေစေကာ အသားပုပ်ခြင်းဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင့်တွင်အောက်ပါတို့ကို တွေ့ကြုံနေရပါက ဤရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံးဖြစ်နေပါမည်။
ခြေလက်တို့ရှိ သွေးကြောများအဆီပိတ်ခြင်း (သွေးကြောများ မာလာခြင်း)
ဆေးလိပ်၊ အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးသုံးခြင်း
တစ်ချို့သော အခြေအနေများကလည်း အသားပုပ်နိုင်ရန် အန္တရာယ်များစေပါသည်။ အောက်ပါအခြေနေများရှိလျှင် အသားပုပ်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။
ရောဂါ သို့မဟုတ် ကင်ဆာကုထုံးကြောင့် ကိုယ်ခံအားကို နှိမ်ထားရခြင်း
ခေါင်းထိခိုက်မိခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ကိုက်ခံရခြင်း၊ လွန်လွန်ကျူးကျူးအပူလောင်ထားခြင်း၊ ပြင်းထန်သော နှင်းကိုက်နာဖြစ်ခြင်း
တစ်ရှူးများကို ဖိကြိတ်မိသလိုဖြစ်စေသော ထိခိုက်မှုများ
Promethazine hydrochloride များ ထိုးသွင်းခြင်းကလည်း တစ်ရှူးများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဤရောဂါရှိနေကြောင်း ဆရာဝန်မှ သံသယရှိလျှင် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုနောက် အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများလုပ်ရန် လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။
ဖြစ်နေသောနေရာမှ တစ်ရှူးများခြစ်ယူပြီး သေနေသောဆဲလ်များ ရှိမရှိသိရန် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် ကြည့်ပါလိမ့်မည်။
သွေးဖြူဥများ အလွန်များနေခြင်းက အသားပုပ်စေသောပိုးကူးစက်မှုရှိကြောင်းကို ပြညွှန်ပါသည်။
တစ်ချို့သောပုံရိပ်ဖော်ခြင်းများမှာ အတွင်းအင်္ဂါများ၌ အသားပုပ်မှုပျံ့နေခြင်းရှိမရှိသိရန် အကူအညီပေးပါသည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုများတွင် ဓါတ်မှန်၊ MRI သို့မဟုတ် CT တို့ဖြစ်သည်။
Gangrene (အသားပုပ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လမ်းညွှန်ထားသော ကုသမှုများမှာ –
ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခံနေရလျှင် ဆရာဝန်မှ ပဋိဇီဝဆေးများကို ပေးပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အကြောဆေးအနေနှင့် ဆေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။
အသားပုပ်လောက်အောင် သွေးကောင်းကောင်း မလျှောက်သောသူများတွင် သွေးကြောခွဲစိတ်မှုများ ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။ ထိုမှသာ တစ်ရှူးများမှပြန်လာသော သွေးပြန်ကြောတွင်း သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ငွေ့ကြောင့် အသားပုပ်သူအား အောက်စီဂျင်ပြည့်ဝသောအခန်းတွင်ထားပါက ဘက်တီးရီးယားပေါက်နှုန်းကိုနှေးစေပါသည်။ ထိုကြောင့် အရေပြားအတွက် ပြန်ကုစားချိန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောက်စီဂျင်ကောင်းကောင်းရလျှင် ပျက်စီးနေသောတစ်ရှူးများ အနာကျက်မှု မြန်ဆန်ပါလိမ့်မည်။
ပြင်းထန်သောအသားပုပ်ခြင်းများတွင် သေနေသောတစ်ရှူးများ ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ထုတ်ရန်လိုပါသည်။ ထိုလုပ်ထုံးအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။
အလွန်ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင် ခြေလက်၊ လက်ချောင်း သို့မဟုတ် ခြေချောင်းလေးများကို ဖြတ်ထုတ်မှ သင့်အသက်ကို ကယ်နိုင်မည့်အခါမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ခြေလက်များ ဖြတ်ကိုဖြတ်ရတော့မည့်လူများတွင် ခြေတုလက်တုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အသားပုပ်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် အသားပုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
သင့်တွင် ဆီးချိုရောဂါရှိပါက ခြေလက်များတွင် ပြတ်ရှနာ၊ ဖိကြိတ်မိသောအနာ၊ နီမြန် ရောင်ရမ်း အရည်ထွက် စသည့် ပိုးကူးစက်မှုလက္ခဏာများကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးပါ။ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လောက် ခြေလက်များကို ဆရာဝန်နှင့် စစ်ဆေးပါ။
ဝိတ်များနေခြင်းက ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ရုံသာမက သွေးလွှတ်ကြောများပေါ်တွင်ပါ ဖိအားကို ဖြစ်စေပါသည်။ သွေးစီးဆင်းမှုကို ကျဉ်းပိတ်စေပြီး ပိုးကူးစက်မှု အနာကျက်နှေးမှုတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆေးရွက်ကြီးကို ကာလကြာရှည်သုံးပါက သွေးကြောများကို ပျက်စီးစေပါသည်။
ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများအား ဆပ်ပြာပျော့ပျော့ ရေတို့ဖြင့် သေချာဆေးပါ။ ထို့နောက် ပျောက်သည်အထိ အနာများကို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းနေအောင် ထားရပါမည်။
Gangrene. http://www.healthline.com/health/gangrene#Outlook7 . Accessed February 23, 2017.